Ireo dingan'ny torimaso | Ny androaniko
[Ankapobeny ] 27 Mey, 2015 04:25
Ireo dingan'ny torimaso
(Isaorako manokana ny namana Soanja sy Radotiana nizara azy ity tary andrefan-trano tary, ary nierako tamin'izy ireo ny hitahirizako azy ato fa moramora amiko kokoa mitady azy raha sendra ilaina)
Mandalo dingana 5 voaporofo ara-tsiantifika ny torimason'ny olona tsirairay manomboka ny fotoana hidabohany eo ambony fandriana mandra-patoriny tanteraka.
1- Alpha – The walking state - MIFOHA
Mahatratra 8 -13 Hz ny refin'ny onja manamarika ny fiasan'ny atidoha eto. Onja Alpha no fiantsoana azy.
2- Theta – Light Sleep State – (Stage N1) - RENDREMANA
Mihena ho 4 - 7 Hz ny refin'ny onja manamarika ny fiasan'ny atidoha. Mbola mora taitra be ilay olona fa na dia jiro mirehitra na feo kely maneno fotsiny aza dia mampifoha azy.
Miha-miadana ny fihetsiky ny masony ary miha-miadana ihany koa ny fihetsiky ny hozatry ny vatany. Misy olona manonofy amin'ity dingana ity ary raha taitra eo izy dia mety ampahany amin'ny nofiny ihany no tadidiny.
3- Gamma – Sleep State (Stage N2) - MATORY
Mahatratra 12 -16 Hz ny refin'ny onja manamarika ny fiasan'ny atidoha. Zara raha mihetsika ny hozatry ny vatana ary manomboka tsy tsapan'ilay olona matory intsony ny manodidina azy hoe aiza izy io matory io. Ny 45 - 55% amin'ny torimaso no mitranga eto. Tsy mihetsika intsony ny maso. Miha-malefaka ny onjam-piasan'ny atidoha saingy misy onja mahery vaika mitsitapitapy mitranga eny anelanelany eny izay antsoina hoe “sleep spindles.”
4- Delta – Deep Sleep (N3) - MATORY LALINA
Mahatratra 0.5 to 4 Hz ny refin'ny onja manamarika ny fiasan'ny atidoha. Onja Delta no iantsoana azy. Dingan'ny torimaso fiampitana ihany anefa no tena asan'izy ity. Eto amin'ity dingana ity no miseho ny nofy ratsy, mipipy ampandriana, miala teo ampandriana dia mandehandeha na miresaka kanefa tsy mahatsiaro saina.
Miadam-piasa be ny atidoha eto. Misy onja malefaka sy onja maherivaika mitsitapitapy miseho eny anelanelan'ireo Onja Delta. Sarotra fohazina be ny olona matory eto. Tsy mihetsika ny masony ary tsy mihetsika ihany koa ny hozatry ny vatany. Malemilemy ohatran'ny olona mamo sady tsy tonga saina ao anatin'ny fotoana fohy izy raha mifoha eto.
5- Epsilon - REM Sleep (Rapid Eye Movement) (N4) - MATORY MATY
Fitohizan'ny Delta Sleep lalindalina kokoa no miseho eto ary mitohy hatrany ny fahatongavan'ireo Onja Delta ao amin'ny atidoha. Miandalana ny fiampitan'ny torimason'ilay olona avy amin'ny Torimaso Lalina (Delta Sleep) mandeha amin'ny Torimaso Maty (REM sleep). Miha haingana ny fisefoan'ilay olona matory saingy tsy mirindra fa miova ary marivo ihany koa. Mihetsiketsika haingana be ny masony. Tsy afa mihetsika ny hoza-batany. Mitepo mafy kokoa ny fony ary miakatra miaraka amin'izay koa ny tosi-drany. Ohatran'ny very saina mandritra ny fotoana fohy ny olona mifoha eto amin'ity dingana ity.
Araka ny voarakitra ao amin'ny "Journal of Medicine" dia ao anatin'ny 70 ka hatramin'ny 90 minitra aorian'ny fahitana tory no miseho ny Fatoriana Maty voalohany. (Epsilon – REM Sleep).
Eo amin'ny 90 ka hatramin'ny 110 minitra amin'ny ankapobeny no faharetan'ny fiampitampitana ireo dingan'ny torimaso feno iray.
Fohy ny faharetan'ny Fatoriana Maty (Epsilon – REM sleep) ary lava kokoa ny faharetan'ny Fatoriana Lalina (Delta – Deep sleep) ao anatin'ilay torimaso feno voalohany isan'alina.
Arakaraky ny androsoan'ny alina anefa dia mifamadika izy io ary ny Fatoriana Maty (Epsilon – REM sleep) indray no lasa maharitra kokoa ary miha-fohy ny faharetan'ny Fatoriana Lalina (Delta – Deep Sleep.)
Rehefa hadiva haraina ny andro dia mihodinkodina eo amin'ny dingana N2, N3 sy N4 ny torimason'ny olona.
0 Hevitra | "Ireo dingan'ny torimaso"